Accueil > Gazetin'ny nosy > HVM: Mieritreritra ny Malagasy ho kentrona sy bado
HVM: Mieritreritra ny Malagasy ho kentrona sy bado
Natao ho mpandrindra isam-paritra ny antokon’ny filoham-pirenena HVM (Hery vaovao hoan’i Madagasikara) ny filohan’ny faritra rehetra eran’i Madagasikara. Tamin’ny taona 2017 ity no nandraisana ny fanapahan-kevitra araka ny fivoriana izay nataon’izy ireo teto Antananarivo ny volana septambra 2017 lasa teo mba hiatrehana ny fifidianana amin’ny taona 2018. Midika izany fa tsy maintsy terena ho HVM sy hanompo ity antoko ity avokoa ny mpiasam-panjakana rehetra any ambanivohitra any. Midika avy hatrany fa hisy ny hosoka sy ny halatra amin’ny fifidianana izay hisy amin’ny taona 2018 io.
Any Mahajanga indray dia nampiarahana ny fivorian’ny HVM sy ny filankevitrin’ny minisitra. Izany rehetra izany dia mifono zavatra maro tsy mazava, ka isan’ny tsy azo ialana amin’izao ny fampiasan’ny fanjakana ny volam-bahoaka hampiasan’ny HVM amin’ny kongresy ataony. Tena zava-doza ary lainga marivo tototra no ampiasana amin’izany, ka na ny zaza menamena aza dia afaka mahalala tsara ny tiana hahatongavana amin’izao raharaha ataon’ny HVM any Mahajanga izao. Vola avy aiza tokoa ny vola hampiasan’ny HVM hanaovana fivoriambe nefa tsy manana loharanom-bola mazava ity antoko ity.
Mbola midika fa fampiasana ny fahefam-panjakana amin’ny fomba tsy mifanaraka amin’ny lalàna koa izao zavatra ataon’ny HVM izao. Tale jeneraly, tale tsotra , mpikambana amin’ny kabinetran’ny ministera ary mpiasampanjakana maro izay novoriana manerana an’i Madagasikara no any Mahajanga tamin’ny sabotsy sy alahady teo hivory amin’ny HVM ka handany ny volam-bahoaka.
Dia mbola manamarina ny halatra sy ny hosoka hitranga amin’ny taona 2018 hatrany ny zavatra atao any Mahajanga ity ka nanesorana an’ingahy Honoré Rakotomanana tsy ho filohan’ny Antenimierandoholona intsony tsy misy antony ka nampidirana an’ingahy Rivo Rakotovao ao amin’ity toerana ity. Mitranga tsikelikely ankehitriny ny tetika maloto ataon’ny fanjakana HVM amin’izao fotoana izao izay mety hitarika korontana eto amin’ny firenena.
Mbola mazava koa ankehitriny ny tsy amoahana ny lalànan’ny fifidianana sy ny datin’izany, ary ny tsy firaharahana ny mpanao politika mangataka ny hijerena miaraka maika izany.
Manamafy ny halatra sy ny hosoka hisy eto amin’ny firenena koa ny fampiarahana ny ministeran’ny atitany sy ny primatiora ho tantanin’ingahy praiminisitra Olivier Mahafaly amin’izao fotoana izao; mba hahazoana hanao fanodinkodinana ny fifidianana toa ny nisy tamin’ny andron’ingahy Ravalomanan Marc sy ny fanjakana Tetezamita iny ka nampisy ny fivadihan’ny vokatra navoaka tamin’ny haino amanjerim-panjakana milaza ny zavatra tsy marina.
Marihina fa maro no fanjakana nifandimby teto Madagasikara nampiasa ny fanjakana sy nanao hosoka ary nangalatra tamin’ny fifidianana no nivadihan’ny vahoaka niafarany ka nahatonga ny krizy be teto amin’ny firenena. Ity ataon’ny HVM ity nefa dia tena mibaribary toa ny tafika andrefan-tanàna sahady ny tetika ratsy kotrehin’izy ireo. Manahy mafy izany ny Malagasy sy ny sehatra iraisampirenena ankehitriny ary efa nampitandrina ny fanjakana. Tokony hahay handray izany fanamarihana izany ny fanjakana mitondra ankehitriny satria zava-doza hoazy ireo sy hoan’ny firenena ny mety ho vokatr’izany. Aza mieritreritra ny Malagasy ho kentrona sy bado hianareo HVM sy ny mpitondra ankehitriny ireo na dia tsy miteny intsony aza ny vahoaka ankehitriny.
Mbola misy velona ny PSD tamin’ny andron’i Tsiranana Philbert, ny AREMA tamin’ny andron’i Ratsiraka Didier, ny TIM tamin’ny andron’ingahy Ravalomanan Marc, koa anontanio izy ireo ny nahazo azy ireny vokatrin’ny tsy fahafalian’ny vahoaka rehefa tonga amin’ny fetra farany izany.